क'हिल्यै न'सुत्नुहोस् यी ४ पो'जीसनमा, हुनसक्छ पे'टको लागी खत'रा - HPsanchar.com
यो त त’पाई सबैलाई थाहा नै होला, हामी ४ पो’जीसनमा सुत्ने गर्छौ । जुन हो एउटा दायाँ तर्फ, बायाँ तर्फ,सिँधा र उल्टो । हामी सबै यस्तै पो’जीसनमा सुत्ने गछौँ । तपाईले देख्नुभएकै होला, जब हामी सुत्छौँ, सुत्दा सुत्दा ड’राउँछौँ । या कुनै अनौँठो सपना देखेर सुत्न सक्दैनौ । कैँयौ चोटी पोजीसन नमिल्दा बिरामी पनि बनाइदिन्छ । तपाईको सुत्ने पोजीस’न गलत हुनुका कारण तपाई बिरामी हुनुभएको महशुस गर्नुहुन्छ । आज हामी केही पोजिसका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
१) यदि तपाई खाना खाएपछि सुत्ने तरखरमा हुनुहुन्छ भने बायाँ तर्फमा मुख गरेर सुत्नुहोला । यसले तपाईको शरीरमा भएको खानालाई ढिलो ढिलो गरी पचाउँदछ । यसो गर्नाले तपाईको शरीरको तापमान सहि र’हन्छ । किनकी शरीरको बायाँ तर्फमा पा’चन तन्त्र हुन्छ र हृदय पनि शरीरको बायाँ तर्फमा नै हुन्छ । तर यदि तपाई यसको विपरीत दायाँ तर्फमा सुत्नुहुन्छ भने तब तपाईले खाएको खाना छिटै छिटै पाचन हुन थाल्छ । जुन स्वा’स्थ्यको लागी हदभन्दा बढि नोक्सानदायक साबित हुन्छ ।
२) हामीले सुत्ने समयमा सिरानी राखे’र सिँधा सुत्नु हुँदैन । किनकी यसो गर्नाले मे’रुदण्डको ह’ड्डिमा ठुलो समस्या पर्न सक्छ । यदि तपाईलाई सिरानी राखेर सुत्नै पर्छ भने बायाँ तर्फ मुख फर्काएर सुत्नुहोला । यसो गर्नाले तपाईको मे’रुदण्डको हड्डि सँधै सिधाँ रहन्छ ।
३) ध्यान दिनुहोस् कहिले पनि व्यक्ति पे’टमा निर्भर भएर सुत्नुहुँदैन । यसो गर्नाले शरीरलाई सबैभन्दा बढी नोक्सान हुन्छ । र पेटमा निर्भर भएर सुत्नाले अर्थात् उल्टो सुत्नाले शरीरमा धेरै तौल पर्दछ । जसले हृदय सम्बन्धि बिमारी हुने समस्या पनि सँधै बनिरहन्छ । यतीमात्रै होइन एक अनुसन्धानमा यो पनि भनिएको थियो कि सबैभन्दा खतरनाक पोजीसन पेटको बलमा सुत्नु अर्थात् वा उल्टो सुत्नु हो ।
४) एक अनुसन्धानमा यो पत्ता लगाइएको थियो कि दुनियाभरमा करिब ७५ प्रतिशत मानिस घुँडा खुम्चाएर सुत्ने गर्दछन् । जसले घुडाँको जोइन्ट पोइन्टमा नराम्रो असर पर्दछ । यसरी सुत्नाले तपाईलाई थकाइ दुखाइ उत्पन्न हुनसक्छ । जसको घुँडा खुम्चाएर सुत्ने बानी हटेकै छैन, त्यस्ता व्यक्तिले दुबै घुँडाको बीचमा सिरानी राखेर सुत्नुहोला । यदि तपाई स्वस्थ र राम्रो निद्रा लिन चाहनुहुन्छ भने यी पोजीसनहरुमा सुत्नु आवश्यक छ।
ढा’ड दु’ख्ने समस्याको अ’चुक औ’षधी हो कपु’र, यसरी प्रयो’ग गर्नुहोस् मि’ल्नेछ फाइ’दा ! हजुरहरुमा ढाड दुख्ने समस्या छ ? कपुर हुनेछ यसरी अचूक औषधि र हेर्नुस् कपुरको प्रयोग हामीहरुले पूजापाठको लागी धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका छौँ र यसलाई औषधिको रुपमा सहि तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा विभिन्न बिरामीको उपचार सजिलै गर्न सकिन्छ र यदि कसैलाई दम रो’गमा यो अचूक औषधि साबित हुनेछ । साथै एक भाग फु’राएको हिङमा एक भाग कपुर मिसिएर केराउको दाना जत्रो गोली बनाउने र दुई–दुई गोली तातो पानीसँग बिहान–बेलुका सेवन गर्ने तथा तारपिनको तेल टातीमा लगाउनाले दम रो’ग केही महिनामा नै ठीक हुन्छ र यस्तै ढा’ड दु’खेमा पनि यसले फाइदा गर्दछ र दुई पुरिया क’पुरमा एउटा कागतीको रस मिसाएर मनतातो पारी दुखेको ठाँउमा लगाउनाले ठीक हुन्छ र यसको साथै क’पुरको महत्वपूर्ण फाइदाको बारेमा छोटो जानकारी गराऊदछु ।
१ पुरानो खोकीमा: सूठो, पिप्ला र मरिच एकएक भाग तथा ३ भाग कपुर पानी हालेर केराउको गेडा जत्रो गोली बनाउने एकएक गोली दिनमा खिनमा तीन–चार पटक चुस्ने गरेमा पुरानो खोकी ठीक हुन्छ । २.खो’की लागेमा: साधारण खो’कीमा कपुर बालेर धूवाँ सुँघ्नाले ठीक हुन्छ । ३. आउँ बा’थ भएमा: दुई चक्की कपुर र आधा चम्चा सूठो एक ग्लास पानीमा पकाएर खाने बेलामा खाने गरेमा जीर्ण,आउँ,बाथ सबै ठीक हुन्छ । ४.पुरानो बाथ लागेमा: एक डाडु रायोको तेलमा एक चम्चा कपुर तताएर मालिस गर्दा पुरानो गठिया बाथ आदि ठीक हुन्छ । ५.निद्रा नलाग्नेमा, मुर्छा पर्ने रोग लागेमा: फुराएको हिङ एक भागमा कपुर एक भाग मिसाएर केराउ जत्रो गोली बनाएर दुई्दुई गोली तातोपानीसंग खाँदा निद्रा लाग्छ र उन्माद् मुर्छा पनि ठीक हुन्छ ।
यति कुरा याद ग’रेर दिनरात मो’बाइल कम्युटर चलाए पनि आँखालाई केहि हुदैन, जानी राख्नुस् ! आजभोली आँखा कमजोर नभएको मानिसहरु हुदैनन् । बच्चाको आँखामा समेत चस्मा लगाएकै हुन्छन् । कम्प्युटरमा लगातार बसी रहदा आँखा कमजोर हुने समस्या हुन्छ । निरन्तर मोवाइलमा हेरी रहदा पनि आँखा कमजोर हुन्छ । आँखाको महत्व कति हुन्छ भन्ने कुरा देख्न नसक्नेलाई थाहा हुन्छ । तै पनि आँखा मानव जिवनको लागि निकै महत्वपुर्ण र नभई नहुने अंग हो । आँखाको ज्योती राम्रो बनाउन घरेलु खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । आँखा कमजोर हुने कारण खानेकुराले गर्दा पनि हो । त्यसकारण घरमै पाइने यी सामग्रीबाट प्राकृतिक रूपमै आँखाको ज्योति राम्रो बनाउनुहोस ।
आँखामा के गर्ने ? के नगर्ने ? १. आँखा क्रमश कमजोर हुँदै गएको महसुस भइरहेको छ भने कपालमा रङ, हेयर डाई र रसायनयुक्त स्याम्पू प्रयोग नगर्ने । २. एक चम्चा त्रिफला राति माटोको भाँडोमा भिजाउने र बिहान कपडाछान गरी आँखा धुने । ३. बिहान सूर्योदयअघि उठेर घाँसमा खाली खुट्टा १५–२० मिनेट हिँड्ने । य’सो गर्दा आँखाको ज्योति क्रमश बढ्दै जान्छ । ४. तोरीको तेलले पैतला नियमित मालिस गर्ने । नुहाउनुभन्दा १० मिनेटअघि खुट्टाका औँलामा तोरीको तेल दल्नाले पनि लाभ मिल्छ । ७. नियमित रूपमा अंगुर खानाले राति आँखा कम देख्ने समस्या हट्दै जान्छ । ८. १० ग्राम सुकुमेल र २० ग्राम सुपका दाना राम्रोसँग पिस्ने । यसरी पिसेको चूर्ण एक चम्चा दूधसँग नियमित खाने ।
१३. आँखा कमजोर छ भने हरे’क दिन भोजनमा प्याज र लसुनलाई समेट्ने गर्नुपर्छ । लसुन र प्याजमा सल्फर पाइन्छ, जुन आँखा तेजिलो बनाउन उपयोगी हुन्छ । १४. भटमास अथवा भटमासबाट बनेका परिकार खाने गर्ने । यसमा पाइने फ्याट, फ्याटी एसिड, भिटामिन–ईलगायत तत्व आँखाका लागि लाभदायक हुन्छन् । १५. पल्टिएर लामो समयसम्म लगातार टीभी नहेर्ने ।
च’श्मा ल’गाउनुपरेको छ ? यो उपा’य अ’पनाउनुहोस् कहि’ल्यै लगाउनुप’र्दैन च’श्मा